Dhageyso: Madaxweynaha Puntland oo Tacsi ka diray Ganacsade ka tirsanaa kuwa Gobolka Bari oo geeriyooday
Madaxweynaha Dowlada Puntland Dr C.raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa ka tacsiyadeeyay Geerida ku timid Ganacsade Maxamed Huruuse oo ku geeriyooday Dalka Cumaan. Alaha u naxariistee ganacsade Maxamed Huruuse waxa uu ka mid ahaa ganacsatada sida weyn loogaga yiqiin magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari iyo qeybaha kale ee dalka. Madaxweyne Faroole waxa uu u rajeeyay Ganacsade […]
Manchester United vs Chelsea oo kulankoodi ugu horeyay xili ciyareedkan wada basanaya caawa
Labadan koox oo kawada ciyarara horyalka egland ayaa xifaltan wayn kadhexeyo ayaa lugtii koowaad wada basanaya Malinta isninta waxaa kulankan ka hadlay labada macalin ee labada koox MURINHO” ayaa ku jawabay waxaan dhadhan siin doonaa guuldaro xanuun badan oo lama ilawaan ah waxaan kaloo Xasusin doona reer man kulankan inaan ahay isbishal wan Dhanka […]
Musharax Cali Cabdi Awaare oo Tacsi u diray Eheladii uu ka keeriyooday Marxuum Qeybe
Cali Cabdi Awaare Musharaxa Xilka madaxweyne nimo ee Puntland ayaa na soo gaarsiiyay Tacsi uu u dirayo eheladii, qaraabadii iyo Dhamaan umada Soomaaliyeed , ee uu ka geriyoday Alaha u naxariistee Axmed Maxamed Aadan Qeybe oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Hargeysa xarunta gobolada waqooyi ee dalka. Musharaxa ayaa ugu duceeyay marxuumka in uu alle u […]
Alaha u naxariistee Taariikhyahankii weynaa ee Soomaaliyeed Aw jaamac Cumar Ciise oo Geeriyooday
Alah Naxariistiijano ha siiyee waxaa caawa goor maqribkii ah ku geeriyooday Magaalada Jabuuti DAlka Jabuuti taariikhyahankii weynaa ee Soomaaliyeed Aw Jaamac Cumar Ciise . Rabbi ha u raxmadee Aw Jaamac Cumar Ciise ayaa ku xanuunsanaa wadanka Jabuuti halkaasoo uu deganaa, kuna noolaa mudooyinkan ugu dambeeyay dambe. Aw Jaamac wuxuu ahaa qoraa iyo taariikh caan ka ah ku […]
Tacsi: Ganacsade C/samad Yuusuf Maxamed Abwaan oo U tacsiyey eheladii Taariikhyahan Aw-jaamac Cumar Ciise.
Mudane C/samad Yuusuf Maxamed Abwaan oo ka mid ah ganacstada waaweyn ee Reer Puntland islamarkaana ka ahaa wasiirka ganacsiga dowladii Gen Cade Muuse Xirsi ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray dhamaan umada Soomaaliyeed iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday taariikhyahankii weynaa ee Soomaaliyee Aw-Jaamac Cumar Ciise. Waxa uu Wasiir Abwaan sheegay in umada Soomaaliyeed […]
R.Wasaare Cabdiweli Sh. Axmed oo ka tacsiyeeyay geeridi ku timid Aw-jaamac Cumar Ciise
Ra’iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa maanta ka hadlay geerida ku timid tariikh-yahanka Soomaaliyeed, ahaana Qoraaga, Sheekh Aw-Jaamac Cumar Ciise oo xalay ku geeriyooday cisbitaal ku yaala dalka Jabuuti oo uu muddooyinkii u dambeeyey ku xanuunsanaya. Ra’iisul Wasaaruha Soomaaliya waxaa uu si gaar ah tacsi ugu diray Qoyskii […]
Kaka Oo Labo Gool Dhaliyay Kulankiisii 300aad Ee Milan Xilli Rossoneri Ay Gaartay Guushii Labaad Ee Isku Xigta
Kaka ayaa ka dhex muuqday kulankiisii 300aad ee uu wato maaliyada Milan isagoo dhaliyay labo gool, iyadoo kooxda ay gaartay guushii labaad ee isku xigta ka dib markii ay 3-0 kaga takhaluseen kooxda Chievo. Milan ayaa keentay inay hogaanka ku qabato gool uu u saxiixay xiddigooda Mario Balotelli, ka hor inta uusan kabtan Kaka si […]